February 8, 2021 - Babal Khabar
Feb82021 by बबाल खबरNo Comments
काठमाडौँ । आजभोलि जं'ग फुुडको 'बढी सेवन, फ्या'टयु'क्त खाना, व्यायामको अभावजस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरु नचा'हादा नचाहदै मो'टो'पनको शि'कार बन्ने गरेका छन्। यदी तपाई पनि मो'टो'पनका कारण तनाव'मा हुनुहुन्छ। जति प्रयास गर्दा पनि मो'टोप'न घ'टाउन सक्नुभएको छैन् भने चि'न्ता नलिनुहोस्। आज हामी तपाईलाई केही यस्ता टिप्सका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन उपायबाट तपाई सजिलै मो'टो'पन घटा'उन सक्नुहुनेछ। जुन टिप्स रा'तको समयमा नियमित रुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। ग्रीन टी को सेवन राति सुत्नुअघि ग्रीन टी पिउनुहोस्। यसले शरीरमा मेटा'बलि'ज्म बढाउने गर्दछ, जसले रातभरमा तपाईको व'जन कम गर्नमा सहयोग गर्दछ। खुर्सानीको सेवन वैज्ञानिक अध्ययका अनुसार मो'टो'पन घटाउ'नका लागि खुर्सा'नीको से'वन गर्नु पर्दछ। सुत्नुअघि यसको सेवन भोजनमा गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईको वजन ल'गातार घ'ट्ने गर्दछ। चिनी र गुलियो खा
कति पानी पिउनु हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा पानी पिउनु हा’नी’कारक हुन्छ जानिराख्नुस
पानी स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ भन्ने कुरा हामीलाई थाह नै छ । तर कतिवेला कति मात्रामा पानी पिउने भन्नेकुरा सबैलाई थाह नहुन सक्छ । चि'कि'त्सकहरुले सामान्य त प्रत्येक दिन ठूलो गिलासको आठ गिलास पानी पिउन सल्लाह दिने गर्दछन् तर त्यो पानी कति वेला पिउनु पर्छ भनेर बताएका हुँदैनन । तर हामीले केही विज्ञसंग यसबारेमा कुरा गरी पानी पिउने ठीक समयको बारेमा जानकारी लिने कोषिश गरेका छौँ । कतिवेला पिउने पानी विहान उठनासाथ एक गिलास पानी पिऔँ स् विहान उठनासाथ एक गिलास पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । यसले शरीरका अंगहरुलाई क्रियाशिल बनाउँछ । विज्ञहरुका अनुसार विहानको खाजा खानु अघि नै पानी पिउन सकियो भने शरीरका वि'षा'क्त पदा'र्थ शरीरबाट निका'ल्न सहज हुनेछ । खाना खानु भन्दा पहिले एक गिलास पिउँ : खाना खानुभन्दा आधा घण्टा पहिले नै कम्तीमा एक गिलास पानी पिएको राम्रो मानिन्छ । यसले पाचन प्रणालीलाई सहयोग पुर
धनी बन्ने इच्छा छ ? जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० गल्ती
काठमाडौँ । धनी बन्ने इच्छा सबैको हुन्छ । तर कसैलाई जति मेहनत गरेपनि आर्थिक सं'कट आइरहन्छ। मेहनत गरे अनुसार पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने शास्तुका केही नियमको पनि पालना गर्न जरुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही 'बारेमा जानकारी दिदैछौँ । १.महिलासँग दूश्मनी नलिनुहोस् । शुक्र भौतिक सुखका कारक ग्रह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्रभाव रहनेगर्छ । यसैले शुक्र प्रधान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुहोस् । २. देवी लक्ष्मिको मुर्ति एक भन्दा धेरै आफ्नो कोठामा नराख्नुहोस् । शुक्रबारको दिन देवी लक्ष्मिको पुजा विशेष फलदायक मानिन्छ । तपाईंको घरमा धेरै देवीको मुर्ति छ भने आफ्नो सबै कोठाहरुमा अलग–अलग राख्नुहोस् । बाँकीलाई कतै विसर्जन गर्दिनुहोस् । ३. यदि तपाईंको पर्स च्यातिएको छ भने त्यसलाई बदल्नुहोस् र काम नलाग्ने चीजहरुलाई फाल्नुहोस् । एउटा सिक्का शुक्रबारको दिन देवी लक्ष्मिको
खुशीको खबरः घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आज साताको दोस्रो दिन अर्थात सोमबार सुनको भाउ घटेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यो पनि पढ्नुहोस बिहे गराइदिन गयका पण्डितले नै बेहुली लिएर भागेपछी बोल्दा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आँखाबाट झ’र्याे आँ’सु, कारण यस्तो त्यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ८९ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको भाउ भने बढेको छ। आज चाँदी प्रतितोला १३ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो चाँदी प्रतितोला १३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।